Sidee bay Ayahuasca u shaqeysaa sideese ay u hodmin kartaa noloshaada? • Daawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Caafimaadka Sidee ayahuasca u shaqeysaa sideese u kobcin kartaa noloshaada?
albaabka Ties Inc. January 16 2022
maqaal by Ties Inc. January 16 2022
Qof kastaa wuu ka duwan yahay oo wuxuu raadiyaa xalal kala duwan marka uu la kulmo dhibaato ama ay ku dhegto. Mid ka mid ah wuxuu raadiyaa ciyaaraha, kan kale wuxuu ka tagay shaqadiisa, kan kalena wuxuu soo afjaraa xiriirkiisa. Dhakhaatiirta maskaxda ee yar-yar ayaa sidoo kale dadka u keeni kara fikrado cusub. Sidee u isticmaashaa ayahuasca iyo sidee bay ku caawin kartaa?
1 Dhibaatooyinka ay keento ayahuasca
2 Walxaha firfircoon
3 Isticmaal badbaado leh
Ayahuasca waxay ka timid Amazon waxaana isticmaala dadka deegaanka. Shaaha waxaa badanaa laga sameeyaa liana (Banisteriopsis Caapi) si ay u dhex gasho lakabyada hoose ee miyir-beelka. Sida microdosing Cabitaanka daawadan dabiiciga ah waxay kaa caawin kartaa inaad ka gudubto xannibaadaha iyo qaababka waxayna leedahay saameyn soo jiidasho leh. Taasi waxay ka dhigaysaa mid qiimo leh dadka wax yar ka faa'iidaysta daawooyinka caadiga ah ama la kulma waxyeellooyin aad u badan.
Dhibaatooyinka ay keento ayahuasca
Sida walxo badan, isticmaalkeedu maaha khatar la'aan. Cabitaanka shaaha wuxuu keeni karaa lallabbo iyo shuban. Saamayntan ayaa laga yaabaa inay uga sii xumaato isticmaaleyaasha qaarkood marka loo eego kuwa kale. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado walxaha ku jira geedka Amazon, si aad u ogaato waxa aad galayso. Nederlaan, ayahuasca waxaa inta badan lagu hodmay DMT. Walaxdan waa mamnuuc waxaana lagu daray Liiska! ee Liiska Opium.
Walxaha kale ee firfircoon waa harmine iyo harmaline. Walxahani waxay joojiyaan ficilka enzyme gaar ah ee jirka. Tan waxa kale oo loo yaqaan inhibitor MAO (monoamine oxidase). Insaymka MAO wuxuu caadi ahaan u burburiyaa DMT si dhakhso ah haddii la geliyo wax saamayn ah kuma yeelanayso. Waa la jabiyaa ka hor intaanay gaadhin maskaxda. Sababtoo ah ayahuasca waxay joojisaa saamaynta MAO enzyme, way ka yar tahay inay jebiso walaxda DMT. Sababtaas awgeed, DMT waxay geli kartaa dhiigga waxayna gaari kartaa maskaxda, halkaas oo ay saameyn xooggan ku leedahay miyir-qabka iyo jirka. Ka-hortagga MAO ayaa hadda inta badan loo isticmaalaa niyad-jabka waxaana laga yaabaa in Nederlaan lagu qoro qoraal dhakhtar.
Isticmaal badbaado leh
Kahor intaadan bilaabin daroogooyinka ama hallucinogens kale, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u diyaargarowdo. Horay si taxadar leh u akhri oo u oggolow isticmaalayaasha kale, kormeere iyo/ama khabiir inay ku ogeysiiyaan. Waxaa lagu talinayaa in la raaco cunto gaar ah ka hor inta aan la isticmaalin si ay MAO horjoogayaasha ay si fiican u gutaan shaqadooda. Markaa kaliya ma aha qaado oo tag. Waxay xitaa khatar u noqon kartaa dadka qaarkood. Tusaale ahaan, marka laga hadlayo laba-cirifoodka ama cilladaha nafsiga ah, cilladaha jirka qaarkood ama cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga. Durba daawo ma qaadatay? Had iyo jeer la tasho dhakhtar. Tusaale ahaan, dawooyinka niyad-jabka iyo ayahuasca weligood ma wada socdaan.
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah, iyo kuwa kale healthline.com (Source, EN)
6 Hab Oo Dib-u-celinta Maskaxda Ruuxa Ku Nool Noloshaada
Kiniinka CBD wuxuu u muuqdaa inuu yahay beddel wax ku ool ah…
7-da siyaabood ee ugu sarreeya ee lagu yareeyo walbahaarka iyo…
Sannad Cusub oo Wacan! Isbeddellada Cannabis ee 2020: Kor u kaca...
Saamileyda ugu weyn ee Coca-Cola ayaa kula talisa ka hortagga cabitaannada fudud ee weyn ee…